Nanivana ny vidiny ofisialin'ny Xiaomi Mi Band 5 | Androidsis
Nanivana ny vidiny ofisialin'ny Xiaomi Mi Band 5
Herinandro vitsivitsy lasa izay ny mpanamboatra aziatika dia nanolotra ny fehin-tànana hetsika vaovao. Eny, ny Xiaomi My Band 5 efa zava-misy io. Akanjo azo tratrarina eny an-tsena mba ho lasa iray amin'ireo safidy tsara indrindra hodinihina raha mitady smartband amin'ny vidiny lafo ianao.
Satria, raha misy zavatra mampiavaka ny fianakavian'i Mi Band an'ny mpanamboatra sinoa, dia sandam-bola tsy mampino amin'ny volavolan-tànana misy azy io. Ary ankehitriny, azontsika atao ny manamafy ny vidin'ny Xiaomi Mi Band 5.
Xiaomi Mi Band 5 dia mitentina € 39.99 any Eropa.# MiBand5 pic.twitter.com/lmoSh8OSdm
- Sudhanshu (@ Sudhanshu1414) Jona 27, 2020
Mendrika ny mividy ny Xiaomi Mi Band 5 amin'ny vidin'ny 39,99 euro?
Ankehitriny, mpamoaka fanta-daza namoaka tao amin'ny piraofiliny Twitter ny vidin'ny Xiaomi Mi Band 5 any Eropa. Amin'izany fomba izany dia ho tonga any Espana amin'ny vidiny 39,99 euro ny fehin-tanana nandrasana hatry ny ela. Tarehimarika iray tratra tamin'ilay teo alohany. Ary ny fahitana ny mampiavaka an'ity smartband ity, dia fifampiraharahana tokony horaisina.
Aleo tadidio fa ny Xiaomi Mi Band 5 dia manana vaovao mahaliana. Ho an'ny vao manomboka, ny tabilaony dia voaforon'ny tontonana OLED 1.2-inch, fiovana miavaka amin'ny 0,95-inch an'ny maodely teo aloha. Izany dia tsy maintsy ampiana rafitra vaovao an'ny fiampangana andriamby izay ahafahanao mameno ny fehin-tànana nefa tsy mila esorinao ilay izy.
Ahoana no ahafahana manao izany raha tsy amin'ny fitaovana iray karazana toy izao, ny smartband Xiaomi vaovao dia misy fanoherana ny rano (azo alentika hatramin'ny 50 metatra), ho fanampin'ny fanaraha-maso hatramin'ny 11 ny hetsika ara-panatanjahantena isan-karazany, ao anatin'izany ny filomanosana na ny fivoahan-tsambo. fa na inona na inona fanatanjahan-tena ataonao, dia mirakitra ny angon-drakitra rehetra ny fehin-tànanao.
Ny icing amin'ny mofomamy dia fomba fanaraha-maso lavitra hanakanana sary amin'ny findainao, ary koa bateria tsy mety ritra, iray amin'ireo mpanentana lehibe manao mividy Xiaomi Mi Band 5 ho fahombiazana tanteraka. Bebe kokoa, mahita fa ho lany ihany izany 39,99 euros.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Fitaovana hafa » Nanivana ny vidiny ofisialin'ny Xiaomi Mi Band 5
Imaguari dia hoy izy:
Mamaly an'i Imaguari
Ity dia Imaguari, miaraka amin'ny NFC ho an'ny fandoavam-bola amin'ny Mastercard. Izy io dia singa iray izay tokony ho tonga amin'ny tarika hendry sasany amin'ny taona ho avy.
[VIDEO] Lalao Androidsis tsara indrindra amin'ny volana ho an'ny volana Jona: Kartrider Rush +
Honor Play 4e dia hita eo amin'ny afisy mampiseho famaritana